IReyethi epholileyo yeBothy eneTub eshushu!
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLaura
IBothy encinci enomtsalane ehlaziyiweyo kwifama yethu esisebenzayo, ekwintendelezo yethu kanye ecaleni/ngokuthe ngqo malunga nendlu yethu. Ingaphakathi elithandekayo elinekhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nendawo yokutyela kumgangatho osezantsi kunye nesitovu esibaswa ngamaplanga. Igumbi lokuhlambela phantsi kunye ne-cubicle yeshawari.
Umgangatho ophezulu ligumbi lokulala elipholileyo elinesitayile esisezantsi kakhulu ukwenzela iindwendwe ezinde...nceda ukhumbule iintloko zakho xa ukhwela ebhedini!
Indawo yegadi enefenitshala yegadi ye-bistro, ibhafu eshushu kunye ne-BBQ (nceda uze namalahle akho).
Intwana enomtsalane ehlaziyiweyo iBothy ebukekayo yangaphakathi (ngaphandle komkrwelo ongaqhelekanga kwaye iphawule ezindongeni/ipeyinti evela kwiziphatho zesutikheyisi njl.njl). *Bobabini bajonga kumnyango wethu wendlu/ngasemva apho singena siphuma endlwini yethu*. Siyazama ukwenza ukuhlala kwakho kube ngasese kangangoko kodwa nceda uqaphele ukuba i-Bothy ayikho kwindawo yodwa.
Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nendawo yokutyela kumgangatho osezantsi kunye nesitovu samaplanga. *Nceda Qaphela* - i-oveni yi-oveni yokuhambisa/imicrowave. Kukwakho neplagi ephezulu yetafile kwi hob eneringi ezi-2. Ifriji inedrowa encinci yesikhenkcezisi kuyo ... ilungele ii-ice creams / ingxowa yee-ertyisi!
Igumbi lokuhlambela likumgangatho osezantsi kunye ne-cubicle yeshawa kunye nesinki egcweleyo.
Umgangatho ophezulu ligumbi lokulala elipholileyo elinesitayile esisezantsi kakhulu ukwenzela iindwendwe ezinde...nceda ukhumbule iintloko zakho xa ukhwela ebhedini! :-)
*Ukuba ungathanda ukuhlala e-The Bothy kodwa awunamdla wokusebenzisa ibhafu eshushu ngoko ke kucuthwa ubusuku ngabunye kunokufakwa* (ithunyelwe ngesinikezelo esikhethekileyo).
Ibhafu eshushu imi kwisitiya esincinci esibekwe ecaleni kwe gable yabo bobabini. *Nceda uzise iiflops/crocs njengoko kuya kufuneka uhambe phezu kwamatye engqalutye ukuya ebhafini. Kukho amashiti okuhlamba.
4.94 out of 5 stars from 203 reviews
4.94 · Izimvo eziyi-203
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi203
Indawo ebukekayo kakhulu enembono entle kunye netrafikhi encinci. Ibekwe kwifama yethu esisebenzayo. Incasa entle yelizwe laseScotland.
Sifumaneka ngeFowuni okanye ngeTeksi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Perth